Mpiasa fiarovana 20 lehibe indrindra eran'izao tontolo izao 2022 - Victor Mochere
Ny toe-karena ara-tafika eran-tany dia niova tato ho ato noho ny fironana amin'ny fandaniana ara-tafika sy ny teknolojia. Ny mpiantoka fiarovana dia fikambanana orinasa na olon-tsotra izay manome vokatra na serivisy ho an'ny departemanta miaramila na fitsikilovana an'ny governemanta. Ny vokatra amin'ny ankapobeny dia misy fiaramanidina miaramila na sivily, sambo, fiara, fitaovam-piadiana ary rafitra elektronika, raha toa kosa ny serivisy dia mety ahitana lozika, fanohanana ara-teknika sy fanofanana, fanohanana fifandraisana, ary fanohanana ara-teknika miaraka amin'ny governemanta.
Ny maha-mpandraharaha voalohany dia mety hahasoa ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny orinasa rehetra. Na manana orinasa madinika na orinasa lehibe ianao, dia mbola afaka manolotra fifanarahana fiarovana. Na izany aza, ny mpandraharaha ara-piarovana dia tsy manome fanohanana mivantana amin'ny hetsika ara-miaramila. Araka ny Fifanarahana Genève tamin'ny 1949, ireo mpiantoka ara-miaramila mandray anjara amin'ny fanohanana mivantana ny hetsika ara-miaramila dia mety ho lasibatra ara-dalàna amin'ny famotorana miaramila.
Zahao ireo mpiantoka fiarovana 20 lehibe indrindra eran-tany.
Ny vola miditra amin'ny fiarovana
Ny sandan'ny anjara General Dynamics Corp.